Home Wararka Ciyaaraha Juventus oo dalab ka gudbisay Qadka dhexe ee Sassoulo Manuel Locatelli.
Kooxda Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay u soo gudbiyeen dalab cusub ciyaaryahanka khadka dhexe ee Sassuolo Manuel Locatelli Xiddiga qadka dhexe ee aadka u shaqeeya ayaa soo jiitay qaar ka mid ah kooxaha waa weyn ee adduunka ka dib qaab ciyaareedkiisii cajiibka ahaa ee furitaanka koobka euro 2020 ee xulka Italy
Locatelli ayaa dhaliyay gool geesinimo ah kulankii ay 3-0 kaga badiyeen Switzerland ciyaartii labaad ee xulkiisa Sida laga soo xigtay La Gazetta dello Sport, Juventus waxay aad ugu baahan yihiin inay kala soo wareegaan Locatelli Sassuolo xagaagan. Bianconeri ayaa gudbisay dalab furan oo ah 25 milyan euro balse Sassuolo ayaa diiday.
Kooxda Neroverdi ayaa la rumeysan yahay inay dalbaneyso lacag dhan 40 milyan oo euro oo ay ku qiimeeyan Manuel Locatelli waxaana wararka xanta ah ay soo jeedinayaan in Juventus ay soo laabatay iyadoo u sida dalab cusub qadka dhexe ee Saussolo Kooxda reer Talyaani ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u yihiin inay bixiyaan 30 milyan oo euro oo lagu darayo midkood da ‘yarta Juventus Nicolo Rovella, Radu Dragusin ama Nicolo Fagiolo.
Previous articleArsenal oo ku dhow in heshiis cusub ay ka saxiixato Kieran Tierney.
Next articleKooxda ku dhow heshiiska Ben White oo La ogaaday.